Hits: 261EDITORIALY Ry havana malala! Ho aminao anie ny fiadanan’ny Tompo Jesoa “Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrao” Lohahevitra vaovao indray no hitaomana antsika Fiangonana amin’ity volana martsa ity. Hiditra ny vanim-potoanan’ny Karemy rahateo isika izao ka ampirisihina mba handini-tena sy hanamasina ny fiainantsika. Koa miantso antsika mba hiverina amin’ny Tompo ny lohahevitra eto. Izy Tompo Andriamanitra […]
Hits: 231Faly misaotra an’Andriamanitra isika noho ity volana vaovao nomeny antsika amin’ity taona 2020 ity. “Mahatoky ny Teny vavolombelon’ny Tompo” Izany indray no lohahevitra banjinintsika amin’ity volana febroary ity. Ireto misy hevitra vitsivitsy hifampizaràna amintsika ambaran’izany. Mahatoky ny tenin’ny Tompo: Azo hametrahana fitokisana ny Tenin’ny Tompo. Tsy mandainga ny Tompo rehefa miteny. Azo hiateherana ny […]
Hits: 357“Indro ankehitriny no andro fankasitrahana; indro, ankehitriny no andro famonjena” Isa. 49: 8 Ny Mpitandrina mivady sy ny FJKM Québec dia miarahaba antsika rehetra noho izao taona vaovao 2020 izao. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana anie handrotsaka ny fitahiany sy ny fahasoavany ho antsika tsirairay sy isika isam-baravarana mandritr’izao taona izao. “Maneho ny tàna-maheriny ny Tompo Andriamanitra” […]
Hits: 204EDITORIALY Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra. “Iaino ny fiadanan’ny Tompo” Azo inoana fa isika rehetra dia samy mitady fiadanana avokoa; indrindra ka izany fiadanana avy amin’ny Tompo izany. Koa ireto misy fampatsiahivana tiako omena anao anio: Efa nomen’ny Tompo antsika maimaim-poana sy feno ny fiadanany fony izy tety an-tany […]
Hits: 165EDITORIALY novambra Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra. “Ho avy amin’ny heriny ny Tompo” Mazava tsara ny tian’izany lohahevitra izany ho lazaina : Tsy maintsy hifanatrika amin’ny Tompo isika ary tsy ho afa-miala amin’izany. Hadinina amin’izay nataontsika rehetra isika amin’izany fiavian’ny Tompo izany koa mila mihomana isika. Tsy fotoana mampatahotra akory […]
Hits: 319Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra. “Maniria ny haminany” Izany indray no lohahevitra vaovao iainantsika Fiangonana amin’ity volana oktobra ity. Tsy zava-baovao ho an’ny mpino akory ny fitaomana azy haminany fa efa hatrany am-boalohany no niaina izany izy ireo. Ao amin’ny Baiboly rahateo dia mibahan-toerana ao ny resaka faminaniana sy […]
Hits: 257EDITORIALY septambra 2019 Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra. “Manompoa ny Tompo amin’ny fahamasinana” “… mba hatolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompon’ny fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana” Rom. 6: 13. Ny voambolana hoe “masina” dia mifamatotra amin’ny hoe “hatokana”. Raha masina Andriamanitra dia tena mitokana tsy […]
Hits: 266EDITORIALY Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra. “Miadia ny ady tsaran’ny finoana” Tsy ny vatana, na ny fiainana, na ny saina ihany no miady ho antsika fa misy ady ihany koa ny “Finoana”. Saingy ny tombony ho antsika dia tsy voatery ho ratsy hatrany akory ny ady ho an’ny finoana fa tenaazo […]
Hits: 216EDITORIALY Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra. “Manatrika ny mino ny Tompo” Toky sy fanantenana no entin’izany lohahevitra banjinin’ny Fiangonanatsika izany, amin’izao volana vaovao izao. Manoloana ny fahasahiranana sy ny olana maro mianjady dia sahiran-tsaina isika ka mieiritreritra fa tsy hitan’Andriamanitra intsony ny manjo antsika. Ity lohahevitra ity anefa dia […]
Hits: 276EDITORIALY Ry havana malala! Ho aminao anie ny fiadanan’ny Tompo Jesoa “Manamasïna fiainana ho an’ny Tompo” Lohahevitra vaovao indray no hitaomana antsika Fiangonana amin’ity volana martsa ity. Hiditra ny vanim-potoanan’ny Karemy rahateo isika izao ka ampirisihina mba handini-tena sy hanamasina ny fiainantsika. Ny hoe “Manamasina ny fiainana” dia “manokana ny fiainana” ihany no dikany. […]